Ukufunda Kwami Okulandelayo: Ukumaketha Okudonsela phansi | Martech Zone
Ukufunda Kwami Okulandelayo: Ukumaketha Okudonsela phansi
NgoLwesibili, ngo-Mashi 25, i-2008 NgoMsombuluko, Mashi 7, 2016 Douglas Karr
Okulandelayo ohlwini lokufunda (olunqwabelanisa ngempela) kuyinto Ukukhangisa kwamandla adonsela phansi.
Abantu abahle baseWiley bangithumelele iNcwadi Yokumaketha - kumele ngabe babonile ukuthi ngiyisincwajana sezincwadi Zokumaketha. Kulabo kini abagwema izincwadi zebhizinisi ezifana nobhadane kepha bathanda ukufunda ukuziphatha komuntu… yilokho engikuthandayo ngezincwadi Zokumaketha.
Omunye wangibuza kanye ukuthi ngiyifundile yini iSociology. Ngicabanga ukuthi nginomqondo othile… ngikholwa ukuthi yilokho okumakethwa okuyikho. Angisho ukuthi ngiqonda okuningi ngokuziphatha komuntu, kepha ngiyathanda ukukugcina futhi ngihlanganyele nabantu engikubonayo.
IGravitational Marketing, iThe Science of Attracting Customers, inekhava ebushelelezi, eshelelayo isayithi, ibhulogi ebushelelezi, nencazelo enhle kakhulu:
I-Gravitational Marketing inikeza osomabhizinisi, abanikazi bamabhizinisi, abantu abathengisayo kanye nabachwepheshe bezokumaketha indlela elula yokuheha amakhasimende nokuvala ukuthengisa ngaphandle kokwenza umsebenzi wezandla wokuthengisa njengokushaya okubandayo, ukubheka noma ukucela ibhizinisi.
Ibhalelwe abantu abafisa ukuthengisa, inzuzo, amakhasimende nemali ephaketheni labo kodwa abangathanda ukuyenza ngaphandle kwemisebenzi yezandla, le ncwadi yembula imigomo yokuheha amakhasimende ngokwemvelo nokwenza kalula nangokuzikhandla ukuthengisa ngaphandle kwe-pushy, in¬your¬face, hardsell amaqhinga. Ihlanganisa izeluleko ezisebenzisekayo ezisuselwa ezindleleni ezivivinyiwe neziqinisekisiwe ezinemibhalo yezinhlobo ezivela emiseleni, ukuthengisa ngezintambo ezingenantambo kanye nokuhlangenwe nakho kokumaketha.
Angiyena oweqili, kepha angizange yahlulela incwadi ngekhava yayo [kuhloselwe]. Izingcaphuno zabanye ababhali zizwakala ngathi le ncwadi iyahlekisa, ishaya kanzima, nasebusweni bakho. Lokho akuzwakali kushelela njengezikhangiso… kuzwakala njengencwadi engizoyithokozela kakhulu.
Ungalanda ifayela le- Ingcaphuno Yokumaketha Okudonsayo kuwebhusayithi yabalobi. Ngizokwabelana ngombono wami wencwadi emasontweni ambalwa uma sengiyiqedile.
Tags: ukuheha amakhasimendeukumaketha kwamandla adonsela phansiUJimmy VeeUJoel Baueribhuku lokumakethaUTravis Millerwiley
I-5PM: I-SaaS ephethwe ngokugcwele ye-Project Management
Kuxoshwe: MyBlogLog kanye neBlogCatalog Widgets
Mar 25, 2008 ku-8: 35 PM
Lokhu kubukeka njengencwadi enhle. Ngifisa sengathi bangangithumelela ikhophi engizoyifunda futhi ngiyibuyekeze. Ngizoyengeza ohlwini lwami, olukhula ngokuxhuma nemingcele njengamanje.
Mar 31, 2008 ku-8: 36 AM
Ngithanda umbono wokuba namakhasimende eze kuwe - ngamandla adonsela phansi. Leyo yindlela engcono kakhulu, uma ikhasimende likholelwa ukuthi bebefuna umkhiqizo kwasekuqaleni, hhayi ukuthi uwuphushele umkhiqizo. Siyabonga ngamakhanda kule ncwadi.